Kalakar starting with letter | Hamro Kalakar
Kalakar starting with letter 
अभिनेता, मोडल,उदघोषकको राम्रो उपमा पाएका कलाकार विष्णु अर्याल आमा बेलकुमारी अर्याल र बुवा होम बहादुर अर्यालको कोखवाट थानापती,४—थेर्गा,गुल्मीमा विष्णु अर्यालको जन्म भएको हो ।उनको जन्म दिन माघ २६ गते पर्दछ । उनी...
मगना लामा नेपाली सञ्चार जगतमा छाइरहने नाम हो । कान्तिपुर साप्ताहिकको ब्लोअप पेजमा समेत पटक पटक स्थान पाएकी उनी तेस्रोलिंगी मोडल हुन् । जन्मिदा पुरुष भए पनि पछि महिलाको स्वाभाव आफूमा विकसित हुँदैगएपछि उनले आफू तेस्रोलिंगी महिला भएको थाहा पाइन् र आफूला...
VJ, Model, Actress
सन् १९९५ मा मिस नेपालमा भाग लिए पछि पल्पसा डंगोलको कला यात्राको श्रीगणेश हुन्छ । काठमाडौंको कीर्तिपुरमा नेवार परिवारमा जन्मिएकी उनी निकै राम्रो नृत्य गर्थिन् । नृत्यमा पटक पटक जितेको अवार्ड र पाएको तारिफले उनलाई कला क्षेत्रमा डोर्याएको हो । रा...
कमल गाउँले अभिनय जगतका सशक्त नाम हो । कमेडियन देखि अन्य सामान्य अभिनयमा पनि कमल गाउँले जमेको नाम हो । दाङ देखि उनको कला यात्रा सुरु हुन्छ । वि.सं.२०५० सालमा नवयुग नाट्य समूहबाट उनको कला यात्रा सुरु भएको हो । स्थानीय स्तरमा यो समूहले नाटक देखाउँथ्यो ।...
अपेक्षा बस्याल पेशाले मोडल हुन् । उनले ३ सयभन्दा धेरै गीतमा मोडलिङ गरिसकेकी छन् । पोखरामा जन्मिएकी उनले मोडलिङको रंगीन दुनियाँमा वि.सं. २०६८ सालबाट प्रवेश गरेकी हुन् । उनले लोकदोहोरी गीतबाट मोडलिङको यात्रा सुरु गरेकी हुन् । जोरबत्ति पालैमा उनको...
स्वस्तिमा खड्का नेपाली चलचित्र उद्योगमा छोटो समयमा नै नोटिस भएको नाम हो । होस्टल रिटन्र्सबाट रजतपटको यात्रा सुरु गरेकी उनले यही चलचित्रबाट भने परिचित भएकी हैनन् । राम्रो ब्यानर भए पनि साहायक रोल भएका कारण उनलाई योचलचित्र नै नेपाली रंगीन दुनियाक...
दिपिका प्रसाईं वि.सं. २०७४ साल देखी नोटिस भएको नाम हो । नायक रमेश उप्रेतीसँग सेता पर्दाको स्क्रिन सेयर गरेपछि उनी नोटिस भएकी हुन् । दिपिकाको डेब्यू मुभी नै ‘ऐश्वर्य’ हो । यस अघि उनले कुनै पनि चलचित्रमा काम गरेकी थिइनन् । यसअर्थ उनी...
नेपाली रजतपटमा लोकप्रिय नाम हो, केकी अधिकारी । मध्यम कद, सुकिलो मुहार अनि मिजासिलो ब्यबाहार उनको परिचय हो । काँचको पर्दा देखि सेतो पर्दासम्म र विज्ञापनसम्म उनी जताततै छाउँछिन् । सेतो पर्दाका व्यवस्त नायिकामा समकालीनहरुको सूचीमा उनक...